Resaky ny mpitsimpona akotry : mpanjifa ka mangina | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : mpanjifa ka mangina
Tsy miavaka amin’ny fitanteram-bahoaka rehetra ny fandehanana fiara-manidina. Ny mpitatitra no be baikobaiko, araka ny fiten’ny bandy dia izy no tompon’ny linina. Raha vao etsy Ivato, dia eo ireo sampana maro karazana, samy manana ny andraikiny avokoa eo amin’ny fitahiana ny fandaminana sy ny fitandrovana ny tsy hisin’ny fanaovana fampihorohorona sy ny tsy ahafahana manondrana antsokosoko an’ireo harena iharann’ny fifehezana manokana. Ho an’izay tsy zatra, mety hifanipaka amin’
izany ny fahitana ny fandaminana ny raharaha, ka vao maika manakorontana ny sain’ny mpandeha. Samy miseho babany avokoa izay manana fahefana kely, ka be betrobetroka ery.
Izay sampana andalovana samy manao Ramatahora daholo. Aiza no tsy ho velona ahiahy, na mihevitra ny tenany madiodio aza ny rehetra izay andeha hiampita any ivelany. Azo heverina anefa fa rariny izany nohon’ny fahamalinana manoloana ny fampiorohorona mitranga eran-tany. Indrisy anefa, ny mpampihorohoro indray angamba no miseho tsy taitra fa efa tsara ofan’ireo mpaniraka azy. Na izany aza, dia tsy mendrika kosa ny fampifilafilana ataon’ireo mpisava farany ny takilan’ny fahafahana miakatra any anaty fiara-manidina. Roa no varavarmbe fidirana any amin’ny sehatra fiantsonan’ny raopilanina. Ny mpandeha efa misavorivory be ihany ao amin’ilay efitra fiandrasana. Ny tompon’andraikitra mpanome toro-marika efa mivezivezy, tsy fantatra izay antony tsy ampahafantarany an’ireo mpandeha hoe iza amin’ireo varavarana roa no hivoahana rahefa tonga ny fotoana. Matetika ilay varavarana tsy nisy filaharana eo anoloana no sokafana amin’
ny minitra farany. Mafinaritra an’ireo tompon’andraikitra angamba no mitazana ireo olona, tsy lehibe tsy kely, mifanjevo toy ny ankizy, miala avy ery amin’ny ilay varavarana tsy nosokafana, hamonjy toerana ery amin’ilay fivoahana ho any anaty raopilanina.
Rahefa tonga any anaty raopilanina moa, dia arakaraka ny mpikarakara ny fiadanan’ny mpandeha, mandritran’ny fotoanan’ny zotra izay mety aharitra adin’ny folo na mahery. Malaza manana traik’efa lafatra eo amin’ny fikarakarana ny mpandeha ireo andian’ny « Mpikolokolo» ao amin’ny Air-Madagascar. Marina izany, raha mikasika an’ireo zokonjokony manodidina ny 40 taona. Nefa kosa, misy sasantsasany amin’ireo zandriny tsy vonton’ny hain’ireto zokiny, ka tsy tonga saina fa ireo mpandeha rehetra anie, efa nandoa ny vidin’izay zavatra aroso aminy fa tsy misy mitrosa na misitraka maimaipaona.